China 92 ​​alumina seramiiki lining tube maka abrasion na corrosion na-eguzogide ọgwụ ngwọta factory na suppliers | YUNFENG
92 alumina seramiiki na-ekpuchi eriri maka abrasion na corrosion na-eguzogide ọgwụ ngwọta
Eyi na-eguzogide seramiiki anwụrụ Ọtụtụ eji na nkà mmụta banyere ígwè, Ngwuputa, ọkụ eletrik, unyi, petrochemical na ndị ọzọ ọrụ, gas siri ike, mmiri mmiri ebu ebu usoro, karịsịa maka oké njọ mmebi etịbe na ikiaka, atọ njikọ. Ọmarịcha uwe na-eguzogide na-anabata alumina ceramik dị ka eriri, ndụ nke ọkpọkọ ahụ karịrị 10 ugboro karịa igwe siri ike. Corrosion eguzogide Alumina seramiiki nwere uru nke mmiri mmiri mbuze, acid na alkali-eguzogide, na-egbuke egbuke nchedo. Esemokwu pr ...
Eyi na-eguzogide seramiiki anwụrụ
elu okpomọkụ seramiiki
Enwere ike iji ya dị ka bọọlụ na-ebu, ala, oche bọọlụ, ngwa ọrụ, ngwa ọrụ seramiiki ọhụrụ, mgbapụta pistin, ihe akàrà na ụlọ ọrụ igwe;
Enwere ike iji ya mepụta okpukpu atọ ikuku valvụ ikuku na preheater n'ime tube na ụlọ ọrụ simenti,;
Enwere ike iji ya dị ka ihe na-emebi emebi na ihe na-emebi emebi, dị ka valvụ bọl, ahụ mgbapụta, combustion carburetor na iyo na ụlọ ọrụ kemịkal.
Enwere ike ịme ya maka nhazi ihe ngwongwo nke ebu ma nwụọ, dị ka extubation, mandrel, extrusion, ọkpụkpọ ọkpụkpọ mpịakọta, mpịakọta, na-ebugharị ala, na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ, di na nwunye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, nkwado ọkụ ọkụ, ihe ọkụkọ, mmiri mmiri aluminom , aluminum ntekwasa akara r na Metallurgical ụlọ ọrụ.
Enwere ike iji ya maka ụgbọ agha ndị agha, afọ ụgbọ elu, uwe mkpuchi bullet, mkpuchi rọketi na ọrụ ndị ọzọ dị elu na ụlọ ọrụ aerospace;
Nke gara aga: Eyi na mmetụta na-eguzogide ọgwụ 92 alumina seramiiki linin cone tube / taper tube maka Ngwuputa ebu pipeline
Osote: Abrasion eguzogide Linings